Lenovo Thinkpad X1 Tablet Review - News Ọchịchị
Great ihuenyo, siri ike imewe, amamiihe keyboard na thunderbolt 3 ka nke atọ na ọgbọ ThinkPad X1 Tablet a nwere ike Nchikota
Isiokwu a na-akpọ “Lenovo Thinkpad X1 Tablet review: dị ka Mkpa Pro ma na USB-C” e dere site Samuel Gibbs, maka theguardian.com on Thursday 11 October 2018 06.00 UTC
Lenovo atọ-emana ThinkPad X1 Tablet Aims na-a dịghị-ikwere Windows 10 kemwepu nke na-enye ọrụ ihe Microsoft ala agaghị: USB-C na thunderbolt 3.
The ụdị na-akpata bụ maara. The n'ezie na kọmputa na-squeezed n'ime ihe 8.9mm oké mbadamba ihe a kickstand si azụ na a magnetically mmasị keyboard na-anọdụ na n'akuku maka mma dee.
Ma, ebe a Lenovo departs si emeri minimalist Mkpa 2-in-1 usoro, eweta ThinkPad staples dị ka a na-atụ ọnụ ara, trackpad mkpọchi, ịwụ ekara keyboard igodo na ịnara ụzọ-warrior adọrọ 4G.
Nke ahụ abụghị na-ekwu na nke a bụ a dị ọcha workhorse, ma Mat-oji agba ọrụ, oge ochie-na-achọ ThinkPad logo na-acha uhie uhie na-egosi ihe na-enye echiche nke a ígwè bụ banyere ịlụ stof mere.
The 13in ihuenyo bụ ibu karịa ị ga-ahụ na n'elu Pro na Eve V, na na na-eme ka ọ dịrị ya mfe iji solo dị ka a na laptọọpụ. Ihuenyo ya onwe ya bụ pin-nkọ, yi na dị nnọọ banyere egbuke egbuke iji na-eji n'èzí. Movies anya ukwu na ya, ezi ikiri akụkụ, na mgbe bezels gburugburu n'èzí bụ nnọọ nnukwu, ha nabata abụọ n'ihu-eche ihu ọkà okwu, a akara mkpisiaka nyocha na a Windows Hello-nyeere Iye ihu ude usoro.
The kickstand bụ dị ka ihe ọma dị ka na n'elu Pro na-nnọọ mma ngwọta maka propping elu a kemwepu mbadamba, ma na ya ma ọ bụ jikọọ na keyboard. Foto: Samuel Gibbs maka Guardian
Na azụ bụ a siri ike-mmetụta kickstand na a dum n'akuku nke ngagharị, nke bụ nnọọ dị ka ihe ọma dị ka ndị na-azụ nke elu Pro, na zuru okè n'ihi na-nri n'akuku gị n'apata ma ọ bụ oche.
The n'ihu-eche ihu ọkà okwu bụ ikekwe a na-adịghị ike mgbe n'ihi na iji X1 Tablet ka a media igwe, n'ihi na ọ bụ ezie na ha na-dịtụ anya na distortion-free, ha na-na-adịghị nnọọ oké olu na-enweghị ihe ọ bụla ụdị bass. Ha ga-abụ ezi ma ọ bụrụ na ị na-aka-na-ejide igwe na-ekiri a TV show, ma na-ekiri ihe mgbe isi nri na-anụ ihe na-aga n'elu ihe extractor ofufe bụ a dịghị-aga.
The X1 Tablet e mere na-anọte aka karịa ọtụtụ. Ihuenyo kpuchie na a mpempe akwụkwọ nke ozodimgba iko, dị ka ọtụtụ ndị mpi, ma ThinkPad akara nwere a akụkọ ihe mere eme nke na-aga mmezi mile na ule megide iru mmiri, vibration na n'ibu ujo, pụtara ọ ga ịnagide everyday jolts na jostles nke n'ụzọ.
Ihuenyo: 13na QHD + LCD
Processor: Intel quad-isi Core i5 ma ọ bụ i7 (8nke ọgbọ)
Ram: 8 ma ọ bụ 16GB
Nchekwa: 256, 512GB ma ọ bụ 1TB SSD
Sistemụ nrụọrụ: Windows 10 Home ma ọ bụ Pro
Igwefoto: 8MP n'azụ, 2MP n'ihu-eche ihu
Njikọta: WiFi akanamde, Bluetooth 4.1, 2x thunderbolt 3 (USB-C), ekweisi, TPM, microSD, ihu ude, akara mkpisiaka nyocha, nhọrọ nano SIM na NFC
Akụkụ: 304.1 x 226 x 8.9mm (15.1mm na keyboard)
Arọ: 890g (1,270g na keyboard)
High-ọgwụgwụ ultraportable arụmọrụ
The mbadamba na keyboard snap ọnụ na nju. Foto: Samuel Gibbs maka Guardian
The X usoro bụ Lenovo si n'elu-ọgwụgwụ ThinkPad akara, nke pụtara X1 Tablet na-abịa na ike niile i nwere ike chọrọ.
Ahụ na-agụnye ị na-ahọrọ ọhụrụ asatọ-emana quad-isi Intel i5 ma ọ bụ i7 processor, 8 ma ọ bụ 16GB nke Ram na ọtụtụ nchekwa.
The igwe ka nwalere nwere a Intel Core i7-8550U processor, 16GB nke Ram, 512GB nke nchekwa na 4G, na nnọọ ama site na ihe niile m tụrụ ya.
Ezie na integrated Intel UHD 620 ndịna-emeputa kaadị nwere ike na-ekweghị n'ókè nke X1 Tablet, igwe jisiri aka ụfọdụ nnukwu 23,000-pixel obosara oyiyi enweghị agbasa ukwuu nke a ajirija.
The Fans na mbadamba-ọkụ elu karịa ụfọdụ asọmpi, ma ha na-adịghị na-karịsịa oké ma ị na-eme ihe dị nnọọ processor-kpụ ọkụ n'ọnụ. Ọtụtụ n'ime oge ha na-na inaudible ke ọrụ na gburugburu ebe obibi.
N'ozuzu arụmọrụ bụ magburu onwe, abịa na nke a elu-ọgwụgwụ ultraportable igwe, ma anaghị atụ anya ime hardcore Ịgba Cha Cha na ya - adịghị m na-agbalị ya na mpụga ndịna kaadị.
The Mat nwa anya ntakịrị dull, ma na-ele ka ọ ga iguzogide scratches na scuff ọma. Foto: Samuel Gibbs maka Guardian
Otu n'ime ihe ndị ahụ na-achụ àjà na ọtụtụ PC mbadamba bụ ndụ batrị. Lenovo ruturu "karịrị-ụbọchị niile" ndụ batrị nke itoolu na-na-a-ọkara awa, ma nke bụ eziokwu bụ na ThinkPad X1 Tablet dịruru naanị gburugburu awa asaa n'etiti ebubo. Nke ahụ bụ na "Mma ndụ batrị" ike mwube ifịk, okwu nhazi na Typora, nchọgharị na Chrome, iji Nextgen agụ, ụfọdụ image edezi na mmekọrita Photo na nza nke email na Microsoft Mail.
Ọ bụ iji nweta ọtụtụ n'ime a ọrụ ụbọchị, ma ọ bụghị iji na-ahapụ chaja n'ụlọ na kpụ ọkụ n'ọnụ ụbọchị. Ekele dị ka ọ na-eji USB Power nzipu-ana, ọ bụla USB-C chaja na zuru ezu wattage ga na-arụ ọrụ dị ka ndị Ẹnam ekese na ndị ọzọ laptọọpụ ma ọ bụ ọbụna multi-chaja etinye si 30W ma ọ bụ karịa.
thunderbolt 3 ọdụ ụgbọ mmiri
abụọ thunderbolt 3 ọdụ ụgbọ mmiri, a Kensington mkpọchi oghere na a SIM tree niile nwere otu akụkụ. Foto: Samuel Gibbs maka Guardian
The X1 Tablet na-abịa na abụọ, dị ka thunderbolt 3 ọdụ ụgbọ mmiri na-amụba okpukpu abụọ ka USB-C ọdụ ụgbọ mmiri. inwe thunderbolt 3 bụ nnukwu ere dị ka mgbasa ahụ ike na-adịghị agwụ agwụ, tinyere nsọ Grail nke otu udo na-ana, jikọọ a 4K monitor na bụla ọzọ elu, i nwere ike na-eche nke. Ọ bụ a ịrịba uru n'elu asọmpi na-enweghị ọbụna USB-C.
Otú ọ dị, enwe naanị ọdụ ụgbọ mmiri abụọ, otu onye nke ga-mkpa n'ihi na ike, pụtara na ị ga-adabere na docks ma ọ bụ n'ógbè nlekọta ọrụ. Ọ bụghị ndị dị otú a nnukwu ihe n'ihi na ọtụtụ, ma a bit nke na ọdụ ụgbọ mmiri-Ukwuu n'Aka bụ apụghị izere ezere ma ọ bụrụ na ị na-etinye ego na a n'ọdụ ụgbọ mmiri nke ụfọdụ ụdị.
E nwekwara a microSD kaadị agụ, nke dị ukwuu, ma ọ na-ezo na a SIM-oghere yiri nke ị ga-ahụ na a ama. Ọ bụ uru dị ka a na-ekpo ọkụ-swappable na kaadị ebe nchekwa na-agụ dị ka gị mkpa a SIM ejector ngwá ọrụ iji nweta ya, na ọ pụtara ejecting na 4G SIM ma ọ bụrụ na ị nwetara otu n'otu oge.
The keyboard bụ magburu onwe, na mma karịa ọtụtụ laptọọpụ. Foto: Samuel Gibbs maka Guardian
N'adịghị ka Microsoft ala Pro, na X1 Tablet na-abịa na a keyboard, na ihe a keyboard na ọ bụ. Windows 10 detachables dị ka nke a na-ebi ndụ ma ọ bụ nwụọ site na àgwà nke keyboards, dị ka ọtụtụ ndị oge ha na-eji dị ka a na laptọọpụ.
Lenovo si keyboard bụ ihe kasị mma m na-eji na ihe ọ bụla kemwepu, na mma ka ọtụtụ nke laptọọpụ. The igodo juputara-sized, siri ike, na-eche oké n'okpuru gị na mkpịsị aka na-ezuru njem ime maka a ala, eju afọ dee ahụmahụ.
The trackpad dokwara ọma. Ọ bụ ezigbo nnukwu, nwere a ezigbo, kpọmkwem elu ma a siri ike click ya, nakwa dị ka ọtụtụ nhọrọ hazie ahụmahụ. Ma e nwekwara a ThinkPad siri ike n'ụdị obere red ọnụ ara TrackPoint n'etiti G, H na B igodo, na atọ òké mkpọchi n'etiti spacebar na trackpad. M hụrụ obere ojiji maka ha ma e wezụga mgbe on a ụgbọ okporo ígwè ebe njedebe nke keyboard e enwe elu n'ime m gootu site efu legroom igbochi trackpad.
The keyboard nwere ya quirks, dị ka FN isi na ala n'akụkụ aka ekpe kama Ctrl, ihe m nwere na-fọrọ nke nta ozugbo ịgbanwee gburugburu na ntọala maka muscle-ebe nchekwa ịkpụ na mado. N'ebe na-adịghị ihe ọ bụla media igodo ma.
The akara mkpisiaka nyocha nwere a bit iberibe set elu, ma na-arụ ọrụ nke ọma mgbe ị na-achọghị iji ihu ude usoro. Foto: Samuel Gibbs maka Guardian
The X1 Tablet nwere Iye dabeere ọdịdị ihu ude usoro nke ahụ bụ nnọọ dị ka ihe ọma dị ka na na Microsoft ala akara. Ọ na-amata gị si mkpọchi ihuenyo na-akpaghị aka dekọọ ị na, na-eme ka nbanye enweghị nkebi.
E nwekwara a akara mkpisiaka nyocha, nke nwere a ubé iberibe Nchikota na ịme ọpịpị na swiping maka ịdenye gị mkpisiaka, ma na-arụ ọrụ nke ọma na ụbọchị na-ụbọchị ọrụ. M na-ejedebe na-eji ya na oche dị ka ihu ude na-arụ ọrụ nke ọma, ma, ọ bụ bara uru n'ihi na akpọchi mbadamba mgbe Handheld na ihu ndọtị, na ihe biometric nhọrọ mma.
Iji gbanye X1 Tablet ghara imeghe keyboard i nwere see ike button ma ọ bụ pịa FN isi na keyboard
Ị na-a oke nke Windows 10 Home ma ọ bụ Pro
The nhọrọ ThinkPad Pen Pro mkpachị n'ime n'akụkụ nke igwe na a kemwepu njide na-arụ ọrụ nke ọma n'ihi na-akanye elu ma ọ bụ na ịbanye akwụkwọ
The Lenovo eleghachi anya azụ, ngwa na-elekọta ọkwọ mmelite na ntọala bespoke na X1 Tablet na di ntakiri nsogbu oge
The atọ na ọgbọ Lenovo ThinkPad X1 Tablet na-amalite mgbe £ 1.480 na a Core i5 processor, 8GB nke Ram, 256GB nke nchekwa na keyboard na n'elu si na £ 2.422 na niile nhọrọ.
The igwe ka nwalere eri £ 1,973.59 na a Core i7 processor, 16GB nke Ram, 512GB nke nchekwa na 4G.
n'ihi na ha tụnyere, Microsoft ala Pro 6 na-amalite mgbe £ 879, na ụdị ihe yiri ọnụ na X1 Tablet.
The ThinkPad X1 Tablet na-egosi na Lenovo nwere ike ime ka a oké kemwepu 2-in-1 Windows 10 mbadamba kọmputa. Ọ bụ ọnụ ala, ma na-enye yiri ma ọ bụ mma nkọwa karịa ya isi na-ama na-Microsoft Mkpa Pro, gụnyere nnọọ mkpa n'oge a n'ọdụ ụgbọ mmiri nhọrọ nke thunderbolt 3.
The X1 Tablet ele ka ọ nwere ike a na-eti na ndị ga-alanarị ahụ tara akpụ mobile ọrụ, nke bụ ihe e mere maka. The ihuenyo dị ukwuu, na na 13in bụ ezigbo size, na kickstand na keyboard na-ghar na arụmọrụ bụ n'elu-notch.
The asaa hour ndụ batrị pụrụ ịdị mma, ma ike 4G na abụọ biometric nhọrọ welcome ose. Ọ bụ ka a mma igwe n'ihi ọrụ karịa play, ma ọ dị mma iji na-sere ọrụ abụọ ma niile ị chọrọ ime bụ watch videos si gafee ụlọ.
Ọ bụrụ na ị na-na na na ahịa a top-ọgwụgwụ 2-in-1 Windows 10 kemwepu, na Lenovo ThinkPad X1 Tablet ga-adị gị ndepụta.
Uru: siri ike na-ewu, ezi ákwà ngebichi, amamiihe keyboard, thunderbolt 3, nhọrọ 4G, microSD kaadị agụ, akara mkpisiaka nyocha, ihu ude
Ọghọm: na abụọ USB-C ọdụ ụgbọ mmiri, microSD kaadị agụ dịghị mfe ịbanye, oké ọnụ
The red ntụpọ na 'i' glows mgbe igwe bụ na nọrọ na njikere. Foto: Samuel Gibbs maka Guardian
Microsoft Mkpa Pro review: nnọọ ihe fọrọ nke nta nke fọrọ nke nta ga-eme n'ọdịnihu nke Windows PC
Microsoft Mkpa Go review: mbadamba nke ahụ bụ mma n'ihi na ọrụ karịa play
Microsoft Mkpa Book 2 nyochaa: a dị ike ma pricey laptọọpụ-mbadamba ngwakọta
Eve V review: upstart Windows mbadamba n'ihi na ike ọrụ nwere oké nwere